Ngisho nothando ujabule - umqondo engenangqondo. Kunzima ukuqonda bazenze walithanda ukucabanga soberly, uma kuziwa uthando unxantathu. Thina ngakho wahlela ukuba kulesi simo yashubisa imizwa futhi wenze izinqumo ezihlakaniphile kuba nzima ngokwengeziwe ngezinye izikhathi. Ngakho, le ntombazane yehlelwa uthando unxantathu. Yini okumelwe uyenze?
Ngo unxantathu owesifazane angase abe nezikhundla ezithile ezimbili. Phezulu noma ezansi. Esimweni sokuqala, ngokuba amehlo amantombazane alwa guys ezimbili. Esikhathini yesibili yena vies ongasipha othandekayo nabanye. Isimo sokuqala sikuthole kubuhlungu kakhulu nokuhlanganyela intombazane, nakuba uzwela ngokuvamile ngaphezulu okwesibili.
Asiqale nesimo lapho intombazane kufanele akhethe omunye wabafana ababili. Lokhu kukhetha kunzima njalo, ngoba ngokuvamile lezi guys zihluke kakhulu. Ezithakazelisa kakhulu wukuthi le ntombazane kulesi simo ngokuvamile uthanda kokubili, kodwa ngamunye ngendlela yalo. Ngokwesibonelo, omunye ukuthi abe nomuzwa wokuthi umzali, futhi owesibili azizwa okuthile eduze ubungani. Le ntombazane batusa ... ukuthola indlela yesithathu ukuthi ngeke ivumelane kuye etholakalayo engaphezu kwemibili, akumangalisi ukuthi akazange ukuyidlulisa kokubili, kodwa ukukhetha sokugcina asipheli. Ngakho, ubuhlobo kokubili wakhe futhi unganelisekile ngalesi simo okuqhubeka iminyaka njengoba uthando unxantathu. Kuthiwani uma wonke uqiniseka ukuthi udinga omunye ezimbili? Ukuze okusho izinzuzo lokubhala nemibi kokubili. Okwamanje samanje. Bese wenza itafula afanayo esizayo. empandleni esekhanda iyovele ibhebhetheke, futhi lokho imfundo enhle uthembisa ukuthuthukiswa intelligence esikhathini esizayo. Asazi ngempela ohlola imihlola, kodwa udinga ukuthi ucabange ngalokho kungaba umuntu. Uma kwenzeka edelelwa sina, hit noma othambekele ephuza iwayini - kungcono ukuba ngokuhoxiswa. Ngeke kube kanjalo injabulo, lutho kodwa imibuzo ka "esingakwenza". Uma bethandana futhi isiqiniseko, umphikisi wakhe odinga ukukwazi ngalo. Kodwa awukwazi ngiwunqamule ubudlelwane kakhulu. Udinga nje ulahlekelwe Luhambo komuntu suitor esibi. Iba ongatjhejisisiko, ayiphenduli futhi ungakujabulisi e ubudlelwano laye. Kufanele sithole izimfanelo dudula kuye futhi sizilingise. Shiya engazishiyanga engena- eziyihlazo zokufumbathiswa iconsi.
Uma elwela soMuntu, indlela ephumelela kunazo zonke yokuxazulula inkinga ukuthola Man khulula, okuzoba kumnandi ukuba zinakekele wena, ukuze ezwa ngalokhu umfana, ubani ukuncintisana. Uma bayabubula zakho ozithandayo wokukhululeka futhi lizodedela entsha, ngakho ke akukhona kakhulu udinga kuye. Futhi uxolo ngalokho umuntu onjalo akudingekile, futhi kungcono ukuhlala noma ukubukeka emuhle, noma ufune omunye umuntu. Zama ukukhohlwa lokhu uthando unxantathu. Kuthiwani uma umfana bawabone yalo futhi baqala ukwenzela sokulungisa izinkinga? Banike enana: ninikela ithuba kwelinye isango kuze kube guy, futhi kuphosa intombazane. Akunakusetshenziswa musa ukujoyina mncintiswano sezenhlalo umuntu, awukwazi ake guys uzizwe ngokwabo amakhosi isimo. Kule buvela uhlamvu yabo kahle somuntu ozikhukhumezayo nokudelelwa kwezindinganiso amantombazane.
Futhi uma ngokungazelelwe uthola ukuthi Azibangisani intombi kothile, yini okufanele uyenze uma umngane athembeke kuwe wantshontsha intandokazi yakho? Ungabuyiseli, kodwa umane ufisa injabulo bese sifinyelela iziphetho lekusasa - ukuze ashaye out kokubili umbuthano wakhe labangane. Kungcono ukushintsha isimo nokuma kwezwe. Hlola i-Internet nendoda wakwelinye funa injabulo naye.
Ngakho, empilweni yakho ebonakala uthando unxantathu. Yini okumelwe uyenze? Kutfola umlingani ngaphandle unxantathu hhayi ukugxila Abantu ababekuwo unxantathu nawe. Kungcono ukusebenza nawe ukuthola umuntu kuphakeme kunokwethu lakhe, umbuthano womphakathi. Lelisu ngokuvamile ziba ngconywana kwabesifazane nokuwuvumela ukuba sibheke isimo sengathi zivela phezulu.
Zaid Massani - uhlamvu kusuka IMisa Effect